Namootni kooronaan Qabaman daballaan Mootummaan Keeniyaa Tarkaanfii Dabalataa Fudhachuu Beeksise
Bitootessa 23, 2020
Pirezdent Uhuruu Keeniyaattaa
Erga kaleessa lakkoofsi namoota Kooronaa vaayresiin qabaman Keeniyaa keessatti saddeetiin dabalee mootummaan biyyattii murtee haarawa dabarseeti jira.
Waan dhibee Kooronaa Keeniyaa keessaa ibsa gaazexeessitootaaf ka himan Mutaahii Kaagwee Kaabineen ministeera fayyaa Keeniyaa, Keeniyaa keessatti namni Vaayresii kanaan hubame 15 guutuun waan yaaddessaadhaaf mootummaan tarkaanfii itti aanu kana fudhate jedhan.
Kaagween, ‘’Mootummaan tarkaanfiiwwan itti aanan kana fudhatee jira. Jalqaba roobii dhufu kanaa kaasee balaliin xiyyaaraa idil - addunyaa kamuu kan gara Keeniyaatti taasifamu adda cite jira. Lammee harra galgalaa kaasees, manneen dhugaatii guutuu biyyattii keessa jiran cufamanii jiru. Manneetiin nyaataa hojii ka itti fufan ta’ee, tajaajila isaanii bakka jireenyaa ykn bakka hojii maammilootaatti geessaniifii deebiwu male mana isaanii keessatti nami akka sooratuuf hin eyyamamuuf’ jechuun dubbatu.
* Mootummaan Keeniyaan Biyyoota Vaayiresiin Koronaa Keessatti Argame Irraa Namoonni Gara Biyyattii Akka Hin Seene Murteesse
Dabalaniis Kaagween mootummaan haga rakkoon kun furamutti, manneetii amantaa akka Masjiidaa fi waldaa Kiristiyaanaa keessatti akkasumas bakka awwaalaatti gurmuun walitti qabamuun dhorkamuu himani.
Haga roobii dhufuuttis namootni gara Keeniyaa dhufuu barbaadan baasii mataa isaaniitiin bakka mootummaan qopheessetti Guyyaa 14’f kophaa bakka taa’an turuu akka qaban himanii, mootummooleen Addunyaa lammilee isaanii Keeniyaa jiraatan fudhachuu barbaadanis haga roobii dhufuu kana qofaatti eyyama qabuu jechuun dubbatan.
Miister Kaagween warra dhiyeenya gara Keeniyaatti deebi’e Guyyaa 14’f ka adda turuun isaanirra turee garuu seera cabsan ceepha’anii jiran. Mootummaan warra akkasiin dhufee biyya seene adamsee kophaa akka turan ni taasisa sana boodas akka seera biyyattiitti himanni irratti banamee adabamuu jedhan.
Pirezdent keeniyaattaanis harra lammileen biyyattii seera mootummaan Vaayresii kana to’achuuf baase akka kabajan gaafataniiru. Dabalaniis, mootummaan isaanii namootni yeroo duulli dhukkuba kana to’achuu taasifamu mana waan turaniif, firoottan isaanii isaan irraa fageenyarra jiran akka salphaatti qunnamaniif tajaajila Teelefoonaa fooyya’aa fi saffisaa ta’e akka argataniif mootummaan isaanii dhaabbilee Teelekoomii waliin ta’uun haala mijeesseeraa jechuun dubbatan.
Vaayrasiin Koronaa Ertraatti Argamee Jira
Itiyoophiyaa Keessatti Namoonni Lama Vaayrasii Koronaan Haaraa Qabamuun Ibsamee Jira
Itiyoophiyaan Daangaawwan Biyyoota Waliin Qabdu Cufte
Afrikaan Vaayrasii Koronaa Ittisuu Dandeesisuu Gargaarsa Meeshaalee Argataa Jirti
Dr. Kaatriin Haamlin fi Fayyaa Dubartootaa Itiyoophiyaa
‘Namoota Daangaa Cehan Qorannaa Kooronaa Irratti Gaggeessuutti Jirra’ Hospitaala Mooyyalee
Dr. Abiyyi Vaayiresii Koronaan Wal Qabatee Haleellaa Lammiiwwan Alaa Irratti Raawwatamu Balaaleffatan